नेप्सेले गर्यो आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य समायोजन - Aarthiknews
काठमाडौं । बिहीवार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको शेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको प्रस्तावित ७ प्रतिशत बोनस शेयर प्रयोजनका लागि नेप्सेले मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको पछिल्लो कारोबार दिन मंगलवार कायम अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार २५७ को अधारमा बोनस पछिको मूल्य नेप्सेले प्रतिकित्ता रू. १ हजार १७५ तोकेको हो । बिहीवार समायोजन मूल्यको आधारमा कम्पनीको शेयर कारोबार खुला हुनेछ ।